Betsaka ny rotsak’orana : miaina anaty rano ny faritra iva | NewsMada
Betsaka ny rotsak’orana : miaina anaty rano ny faritra iva
Par Taratra sur 14/02/2017
Lasa efa fiainana andavanandron’ny mponina eny amin’ny faritra iva ny rano miakatra raha vao mirotsaka misesy ny orana eto an-dRenivohitra. Maharitra andro maromaro aty aoriana vao mitsika tanteraka ny rano izay mifangaro amin’ny rano maloto vokatry ny fahasimban’ny fantsona amin’ny lakandrano. Tsaramasay, Anjezika, Anatihazo Isotry, Ampefiloha Ambodirano, i Besarety hatreny Ankorondrano samy toerana sahirana dibo-drano isaky ny fahavaratra. Maina teo ny andro, nimenomenona ny vahoaka fa sempotry ny hafanana, simba ny vokatra rehetra. Avy ny rotsak’orana, be loatra indray ny nirotsaka ka faly sahirana indray.
Nahatratra 80,7 mm ny refin’ny orana nijojo ny faran’ny herinandro teo, azo ambara fa betsaka izany. Teny amin’ny fokontany nanatonana, mbola tsy nisy ny traboina na niakatra aza ny rano satria tsy mety mandao ny tokantranony ny olona. Mihena koa ny haavony afaka ora maromaro.
Mbola hitohy ny orana, omaly sy anio, eto Antananarivo amin’ny takariva sy ny alina fa hihena ny habetsany. Momba ny fahasimbana vokatry ny orana, trano roa no nahina hitera-doza ho an’ny mponina. Narodana mihitsy ilay teny 67 ha raha nesorina vonjimaika fotsiny ny tompon’ny trano roa miorina eo ambanin’ny tamboho vato nianjera teny Soavimbahoaka.
Samy nanamarika ny rehetra fa niakatra sahady ny haavon’ny renirano telo mandalo eto Antananarivo sy ny manodidina.
Miseho daholo ny kileman’Antananarivo
Lalan-dratsy, faritra dibo-drano, 4’mi tsy manan-kialofana… Ampahany amin’ireo kilema miharihary ireo rehefa mirotsaka ny orana eto Antananarivo. Vao mainka miha lalina ireo lavadavaka eny amin’ny arabe tratry ny riaka sy ny rano miandrona. Miteraka fitohanan’ny fiara lavareny izany satria miezaka miala izany lavaka izany avokoa ireo fiara ary tsy mahay mifandefitra intsony eny an-dalana.
Saika ahitana arabe feno lavaka ny faritra rehetra eto Antananarivo. Nisy ihany ny fanamboarana nandritra ny maintany saingy teo ihany koa ireo simba ary tsy nisy nikitika intsony ka izao vao mainka miitatra izao raha vao ilatsahan’ny orana.
Tsy ny lavadavaka eny amin’ny arabe ihany fa eo indrindra koa ireo faritra iva dibo-drano vao mirotsaka kely ny orana. Anisan’ny tsy ahitana vahaolana ny eny Besarety, Behoririka, Andravoahangy, Antanimena, Isotry….
Tsikaritra koa ireo 4’mi rehefa avy orana tsy manan-kialofana fa mamonjy ny eny ambany tonelina rehefa hariva. Miady toerana mihitsy izy ireny ka izay mahatratra voalohany ihany no mahazo ny toerana tsy lena.
Vonjy sy Tatiana A